Imbali YamaNgqina KaYehova EDominican Republic | Incwadi Yonyaka ka-2015
NGO-1492, uChristopher Columbus wahamba ngenqanawa esiya kwiHlabathi Elitsha—amazwe abangel’ umdla anobutyebi nezinye izinto ezintle. Wathiya esinye seziqithi awafikela kuzo ngokuthi yiLa Isla Española, okanye iHispaniola, ibe ummandla waso omkhulu yiDominican Republic. Kutshanje, abemi abaninzi beDominican Republic baye baxelelwa ngeyona nto yahluke kakhulu—ihlabathi elitsha elinobulungisa phantsi koBukumkani bukaThixo. (2 Pet. 3:13) Siza kuva ngembali ebangel’ imincili yabantu abangamalungisa abaye bafumana eyona nto inexabiso lokwenene.
Funda amagqabantshintshi ngeli lizwe nabantu abahlala kulo.
Kwabathatha ixesha elingakanani abathunywa bevangeli ukuqalisa ukuqhuba isifundo eDominican Republic?
Emva kokuba ebakhangele iminyaka eyi-13, uPablo González wabafumana abantu awayebafuna.
Amanye amaNgqina aye ayinyamezela njani kangangeminyaka intlungu yasejele?
Endaweni yokufaka ingxelo yamabuyelo neeyure, abavakalisi bafaka iphepha elinezinto eziza kuthengwa evenkileni ezifana nekhaphetshu kunye nesipinatshi.
Ngo-1956 amaNgqina kaYehova avunyelwa ukuba aphinde asebenze emva kweminyaka emithandathu umsebenzi wawo uvaliwe, kodwa waphinda wavalwa emva kweenyanga eziyi-11.
ICawa eyayikade inobuhlobo obusenyongweni noTrujillo, yanyanzeleka ukuba ivele phandle ukuba imi phi yaye kwanyanzeleka ukuba icele uxolo kubantu baseDominican.
Babezimisele ukuwatshayela amaNgqina, kodwa baphumelela?
Umatshini wokukopa, inkonkxa, irhonya neecassava zazisetyenziswa ukuze kwenziwe yaye kusasazwe uncwadi lweBhayibhile ngexesha lokuvalwa komsebenzi.
Nangona kwakungavumelekanga ukuba ahlanganisane, amaNgqina aseDominican Republic afumana iindlela ezichuliweyo zokudibana.
Emva kweminyaka uvaliwe umsebenzi, amaNgqina aseDominican afumana inkululeko kwindawo ayengenakuyicingela.
ULuis Eduardo Montás, owazama kwade kwakabini ukubulala uzwilakhe welizwe lakhe, wafumana inyaniso yeBhayibhile ngoxa wayeye kwigqirha awayefuna libulale lo zwilakhe.
UEfraín De La Cruz wayebanjiwe waza wabethwa ngenkohlakalo kwiintolongo ezisixhenxe ngenxa yokushumayela iindaba ezilungileyo. Yintoni eye yamnceda wakwazi ukunyamezela ekukhonzeni uYehova iminyaka engaphezu kweyi-60?
Umfundisi waxelela uMary Glass ukuba uya kushiywa ziingqondo ukuba ufunda iBhayibhile. Kodwa wazixelela ukuba uza kuyifunda ibe wasibhaqa isizathu sokuba kwakungafunwa ayifunde.
Emva kokubulawa kukaTrujillo, kwafika abathunywa bevangeli abaninzi baza baqalisa ukushumayela. Ngokuthe ngcembe, bakwazi ukukuphelisa ukungafunwa kwamaNgqina kaYehova
Umsebenzi wokushumayela watyhalela phambili nakubeni kwakukho umbhodamo wezopolitiko. Yintoni eyenza kwacaca ukuba amaNgqina kaYehova ‘aseza kuhlala apha’ eDominican Republic?
Sakuba asiyichazanga yonke imbali yamaNgqina kaYehova eDominican Republic ukuba asithethanga ngabo bezayo xa kwakucelwa abavakalisi ukuba baze kushumayela.
Emva kokuba elaseDominican Republic lintlithwe yiNkanyamba uGeorges ngo-1998, imigudu eyenziwa ngothando ngamaNgqina yanceda abaninzi yaza yazisa indumiso kuYehova uThixo.
Njengoko ayesiya esanda amaNgqina, enza ntoni ukuze aqiniseke ukuba kukho izakhiwo ezaneleyo zokunqula, kwanabazalwana abaqolileyo abaza kukhokela?
AmaNgqina kaYehova ashumayeza abantu abathetha isiCreole saseHaiti ngoBukumkani. Ekuhambeni kwexesha, kwasekwa amabandla kwaza kwabakho iiklasi ezifundisa ulwimi lwesiCreole saseHaiti.
Iofisi yesebe yamaNgqina kaYehova eDominican Republic yanceda kangangoko eHaiti xa kwakukho inyikima ngo-2010. Kwanceda amatsha-ntliziyo amaninzi.
Ukushumayela nokwenza abafundi eDominican Republic kwaqala ngo-1945. Zininzi izizathu zokukhangela kwikamva eliqaqambileyo.
Ngoxa uLeonardo Amor wayeshumayela eLa Vega, akukho mntu waba nomdla enyanisweni. Ngaba zaziya kuze zitshintshe iintliziyo zabo bantu?
Kwakusithiwa amaNgqina kaYehova abhukuqela abantu baloo dolophu “kwiimfundiso ezibusathanarha.” Kodwa, ayephendula imibuzo yabantu ngeBhayibhile.
UJuan Crispín wayengakholelwa kuThixo ibe wayecinga ukuba zizigalo ezinokulungisa eli hlabathi. Yintoni eyamenza wayeka ukungakholelwa kuThixo kodwa waba ngumkhonzi wakhe?
UJosé Pérez waba liNgqina lokuqala elingevayo eDominican Republic. UJosé wakwazi njani ‘ukuva’ isigidimi seBhayibhile waza wazazi ngokupheleleyo iimfundiso zeBhayibhile?
UJosé Estévez nentsapho yakhe bafumana injongo yokwenene yobomi. Bazibonele njani ukuba uYehova nguMzalisekisi wezithembiso zakhe?
Nakubeni uMartín Paredes wayefundela ukuba ngumfundisi, wayefuna ukuyeka ukukhonza uThixo. Incwadi awayiboleka kumntu owayesebenza kwicandelo lezimali kwesi sikolo yabutshintsha njani ubomi bakhe?